China OEM Fekitori 10KV Kirasi S11 Series Oiri-yakanyudzwa Shanduko Yakazara Yakasimbiswa Simba Shanduko-shengte vagadziri uye vanotengesa | Shengte
OEM Fekitori 10KV Kirasi S11 Series Oiri-yakanyudzwa Shanduko Yakazara Yakasimbiswa Simba Shanduri-shengte
Iyo yakakosha yeS11-M yakateedzana-kurasikirwa kwesimba-inoponesa shanduri inogadzirwa nekambani yedu inotora yakarongedzwa chimiro.
Ichi chigadzirwa chinoenderana nekunyatsotora tekinoroji yepamberi uye tekinoroji yemagetsi-yakanyudzwa transformer uye kusanganisa tekinoroji yehunyanzvi yekambani yedu, ichiisa kuvimbika kwechigadzirwa pakutanga, ichideredza zvakanyanya kurasikirwa-kwekutakura uye pasina-mutoro yazvino yechigadzirwa.
Iyo coil inotora chimiro chezasi axial pfupi-redunhu simba. Kana iyo transformer iri pfupi-redunhu, chimiro chinogona kudzora zvakanyanya axial ipfupi-redunhu simba redhiraivhu uye nekuvandudza zvakanyanya kugona kweshanduko kumira kwenguva pfupi-dunhu.
Iyo inoshandura muviri inotora yakanyanya kuvimbika inotsigira chimiro kuti ive nechokwadi chekuvimbika kumanikidza kwenzvimbo dzepamusoro nedzakadzika dzekoiri. Chimiro chemuviri chese chinoita kuti iyo inoshanduka kumira neyakafupi wedunhu yakasimba kwazvo.
Kusarudza yakaderera flux density mune dhizaini haigone chete kudzikisira iyo-mutoro kurasikirwa kweiyo transformer, asi zvakare kuona kuti iyo yepakati flux haina unsaturated kana iyo transformer inomhanya pasi pemagetsi, kuitira kuti yechitatu harmonic yeiyo transformer idiki kwazvo kana ichifamba .
Mabhaudhi uye nzungu zviri pabutiro rebhokisi zvese zvakagadzirwa nesimbi isina 304 simbi, iyo inosimudzira kugona-kwembesa kugona kweiyo transformer.
Ese ekusimbisa maapuroni anotora akanakisa epuroni epamba, ayo anowedzera nguva yehupenyu hwebasa rekuvhara mapuroni.
Makuriro ekushandisa: Chigadzirwa chakakodzera mhando dzese dzenzvimbo dzekuparadzira, asi zvakare yeEuropean bhokisi shanduko, nharembozha uye zvichingodaro.
S11 yakateedzana chigadzirwa maficha: Inofananidzwa neGG6451-2008, hapana-mutoro kurasikirwa kunoderera neanopfuura 30% paavhareji uye hapana-mutoro wazvino unodzikira ne40%.
S13series chigadzirwa maficha: Zvichienzaniswa neGG6451-2008, iyo isina-mutoro kurasikirwa inoderera neanopfuura 50% paavhareji uye iyo isina-mutoro ikozvino inoderera ne60%. Iyi nhevedzano yezvigadzirwa ine yakasimba kuramba kumudimbu wedunhu, inoshanda uye yakasimba.
1. Iyo coil inotora chimiro chezasi axial ipfupi-redunhu simba, kana iyo transformer ipfupi-redunhu ikaitika, iko kushandiswa kwechimiro ichi kunogona kudzora zvakanyanya simba reshanduri axial pfupi-redunhu, inovandudza zvakanyanya shanduko kugona kwekushingirira pfupi dunhu.
2. Mutumbi weshanduri unotora yakavimbika rutsigiro chimiro kuti uve nechokwadi chekumanikidza pane epamusoro uye ezasi makoiri. Chimiro chemuviri chese chinoita iyo shanduko yakasimba kugona kumira pfupi pfupi wedunhu.
3. Iyo yakaderera flux density inosarudzwa mune dhizaini, iyo isingagone chete kudzora isina-mutoro kurasikirwa kweshanduki, asi zvakare kuona kuti simbi yepakati flux haina kugadzikana kana iyo transformer ichishanda pamhepo, kuitira kuti yechitatu harmonic yeshanduko kufamba idiki kwazvo.
4. Mabhaudhi uye nzungu zviri pabutiro rebhokisi zvese zvakagadzirwa nesimbi isina chiumbwa ye304, iyo inosimudzira ngura kuramba kweiyo transformer.
5. Yese yekuisa chisimbiso gasket inotora yakanakisa muChina, iyo inowedzera zvakanyanya hupenyu hwebasa rekusimbisa gasket.
Muenzaniso Rated chinzvimbo Rated chinzvimbo chiratidzo chekubatanidza Kwete-mutoro Kurasikirwa (W) Mutoro Kurasikirwa (W) Kwete-mutoro ikozvino (%) Ipfupi redunhu impedance (%) Kurema (kg) Nhoroondo (mm) Gauge (mm)
S11-M-125/10 125 Voltage mutemo renji 230 1800 0.8 145 390 700 1180 760 1280
S11-M-200/10 200 kana ± 2 330 2600 0.7 190 520 910 1240 780 1360
S11-M-250/10 250 × 2.5% 390 3050 0.6 200 610 1000 1280 800 1380
Pashure: Fekitori Mutengo Yakaderera Voltage Cable Distribution Bhokisi Rinotengesa-shengte
Zvadaro: mafuta-akanyudzwa transformer